हाईस्पिड ट्रेनबाट रोमबाट पेरिसको यात्रा | एक ट्रेन सेव
घर > ट्रेन यात्रा सल्लाह > हाईस्पिड ट्रेनबाट रोमबाट पेरिसको यात्रा
पेरिस र रोम लगभग हरेक यात्रु बाल्टिन सूची माथि छन्. यी शानदार शहर आफ्नो संस्कृति लागि लोकप्रिय छन्, विश्व-वर्ग भोजन, उत्कृष्ट वास्तुकला र यति धेरै. रोम र पेरिस टाढा अलग हुँदा, तिनीहरूले धेरै राम्रो हो रेल जोडिएको. यो तपाईं यी बीच चयन छैन मतलब भव्य शहर, तपाईं दुवै तिनीहरूलाई भ्रमण गर्न सक्नुहुन्छ! तपाईं यो गर्न मदत गर्न यात्रा हामी तपाईंले साझेदारी सकेसम्म रमाइलो हाईस्पिड ट्रेनबाट रोमबाट पेरिस सम्म कसरी पुग्ने.
उच्च गतिको रेल द्वारा यात्रा
तपाईं मात्र उच्च गतिको जडान प्रयोग फ्रान्स र इटाली मार्फत गति गर्न सक्छन्. रोम बाट पेरिस सम्म यात्रा गर्न को लागी एक सब भन्दा छिटो र सबैभन्दा आरामदायक तरिका Thello लिईरहेको छ उच्च गतिको रेल. यो समकालीन रेल कुनै समय मा पेरिस गर्न whisk हुनेछ. पहिलो, तपाईं एक हाई-स्पीड ट्रेन लिनुहुनेछ रोमको मिलान र मिलानदेखि पेरिसको थेलो उच्च-स्पीड रेलहरूमा. यो यात्रा लागि यात्रा समय भिन्न, जो आधारमा तपाईं टिप्न तालिम. हामी पर्छ तपाईं रूपमा अग्रिम आफ्नो सिट बुक सिफारिस यी रेलका लागि आरक्षण बनाउन एक सीट सुरक्षित गर्न.
लियोनबाट नाई ट्रेनको समय
को सुंदर मार्ग लिन – हाईस्पिड ट्रेनबाट रोम पेरिस
मार्गमा निर्भर गर्दै तपाईले लिने निर्णय जुन तपाईं रोमबाट पेरिसको लागि हाईस्पीड ट्रेनबाट गर्नुहुन्छ, तपाईं सँगसँगै फ्रान्स को सुन्दर सहर मध्ये एक अन्वेषण रमाइलो गर्न चाहनुहुन्छ सक्छ. राम्रो को वैभवशाली अप soaks प्रोभेन्स र यसको भव्य मार्फत साझेदारी यसलाई समुद्र तट, अथाह विचरण र खुला हावामा बजार. नाइस मा बन्द रोक्न तपाईं फ्रान्स अर्को आश्चर्यजनक भाग हेर्न अनुमति दिन्छ र तरिकाले अप पेरिस गर्न रोम तपाईंको यात्रा तोड्न हुनेछ.
प्रोभेन्स गाडिहरु गर्न Dijon
पेरिस प्रोभेन्स गाडिहरु गर्न
प्रोभेन्स गाडिहरु गर्न लियोन
प्रोभेन्स गाडिहरु गर्न Marseilles
बाटो साथ अन्य युरोपेली शहर भ्रमण
क्षेत्रीय रेल प्रयोग र अन्य बन्द रोक गरेर आफ्नो स्वतन्त्रता को भन्दा बनाउन युरोपेली शहर. रोम देखि मिलान यात्रा, जेनेभा मा तपाईं आफ्नो गन्तव्य पुग्न अघि – पेरिस.
पेरिस लिले गाडिहरु गर्न
हैम्बर्ग बर्लिन गाडिहरु गर्न
कुनै रेल यात्रा छ चार घण्टा लामो. यो लामो रेल सवारी नापसंद गर्ने कुनै पनि साहस कर्म गर्ने व्यक्ति को लागि यो सही मार्ग बनाउँछ. यसलाई केही शहर अरूलाई भन्दा भ्रमण गर्न थप महंगा छन् कि मनमा राम्रो छ, त्यसैले आफ्नो बजेट आधारमा तपाईं एक रुचि हुन सक्छ यात्रा हामीले सूचीकृत सबै शहरहरू त्यो समावेश गर्दैन. हाम्रो वेबसाइटमा हेर्नुहोस् र तपाईं रोमबाट पेरिससम्म हाईस्पीड रेलको साथसाथै पेरिसबाट रोमसम्म पुग्न उही रेलवेको साथ तपाईं आफ्नै व्यक्तिगत यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ।. तपाईं पनि नवीनतम पदोन्नति संग मिति सम्म राख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो फेसबुक, twitter र इन्स्टाग्राम पृष्ठ.
पेरिस आफैलाई रोम यो मार्ग बनाउन बारेमा सोच? जाऊ त्यहाँ SaveATrain अनलाइन हाम्रा सबै विशेष भाडा जाँच र आफ्नो अर्को साहसिक योजना सुरु गर्न!
तपाईं आफ्नो साइट मा हाम्रो ब्लग पोस्ट इम्बेड गर्न चाहनुहुन्छ, त्यसपछि यहाँ क्लिक: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhow-to-get-from-rome-to-paris-by-train%2F%3Flang%3Dne - (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल)
#जेनेभा रोम रेल यात्रा ट्रैभलिस ट्राभेलपारिस ट्राभ्रोम
ट्रेन यात्रा अस्ट्रिया, ट्रेन यात्रा बेल्जियम, रेल यात्रा चेक गणतन्त्र, ट्रेन यात्रा फ्रान्स, ट्रेन यात्रा जर्मनी, रेल यात्रा हल्याण्ड, ट्रेन यात्रा इटाली, ट्रेन यात्रा स्विजरल्याण्ड, रेल यात्रा गर्नुभएको नेदरल्यान्ड्स, यात्रा युरोप